Qaramada Midoobay oo cambaaraysay qorshaha Israa'iil ee deegaamaynta Daanta Galbeed - Worldnews.com
Afhayeen u hadlay Qarammada Midoobay ayaa sheegay in
"qorshe aan la isla ogayn"
uu caqabad ku hayay qorshihii nabadda ee xalka labada dawladood ahaa.
Talaadadii ayuu sheegay Ra'iisalwasaare
​Israel oo deegaamayn ka billowday dalka Falastiin
Maamulka Israel ayaa shaaciyay inay billaabeen qorsho cusub, oo 3,000 oo guryo ah uga dhisayaan magaalada Daanta Galbeed, ee dalka Falastiin. Ra'iisul Wasaaraha Israel...
Gareowe Online 2017-02-01
Madaxweynaha dalka Maraykanka Donala Trump ayaa joojiyay siyaasaddii Maraykanka ee ku adkaysanaysay xal labo dawladood ah oo dhexmara Falastiiniyiinta iyo Israa'iil. Trump...
Xoghayaha guud ee Qaramada Midoobeey Antonio Guterres ayaa sheegaya inaysan jiran waddo kale oo lagu xallin karo qalalaasaha Israa'iil iyo falastiin, aan ka ahayn inay laba...
Israel ' ayaa ansixisay 464 laga dhisayo dhulka ay haysato ee Daanta Galbeed' ayay sheegtay ...
Israel ayaa ansixisay dhisida 285 oo guryo cusub ah oo laga dhisayo dhulka ay ka haysato Falastiiniyiinta ee Daanta Galbeed, sida ay sheegtay ururka Peace Now. 234-guryo ee...
Maraykanka oo safiir ka dhigay nin taageersan deegaamaynta Israa'iil ee dhulka Falastiiniyiinta
Aqalka Senate-ka ayaa meelmariyay in David Friedman uu noqdo safiirka cusub ee Maraykanka u fadhiya Israa'iil. Xubnaha u codeeyay ayaa ahaa 52 waxaana meelmariyay 46,...
Golaha amniga ee UN oo dalbaday in la joojiyo deegaameynta Israa'iil
Golaha amniga ee Qaramada Midoobeey ayaa wuxuu meel mariyay qaraar ku baaqaya in la joojiyo deegaameynta sharcidarada ah ee Israa;iil ay ka wado dhulka Falastiin. Codeynta...
Golaha amniga ee UN oo dalbaday in la joojiyo deegaameynta Israa\_'iil
Golaha amniga ee Qaramada Midoobeey ayaa wuxuu meel mariyay qaraar ku baaqaya in la joojiyo deegaameynta sharcidarada ah ee Israa;iil ay ka wado dhulka Falastiin. Codeynta ayaa dhacday ka dib markii Mareykanka uu diiday inuu u adeegsado codka qayaxan ee Veto. Qabyo qoraalka oo ay soo diyaarisay Masar ayaa dib loo celiyay ka dib markii Donald Trump uu sidaasi codsaday. Balse,...
Benjamin Netanyahu, ayaa sheegay inuu ku amray wasaaradda arrimaha dibadda ee Israa’iil inay bilk u soo afjarta qeemeynta ku saabsan xiriirkooda Qaramada Midoobeey. Waxaa ka mid ah qeybaha ay qiimeynta ku sameynayaan...
Maraykanka: \_'Deegaamaynta Cusub ee Israa\_'iil dan u aha nabadda\_'
Deegaamaynta cusub ee Israa'iil "waxaa laga yaabaa in aysan gacan ka gaysanaynin" in xal nabadeed lala gaaro Falistiiniyiinta ayuu yiri Aqalka Cad ee looga arrimiyo dalka Maraykanka. War qoraal ah oo ka soo baxay Aqalka Cad ayaa intaas ku daray "in maamulka madaxweyne Donald Trump uu san go'aan rasmi ah ka qaadanin arrinta deegaamaynta Israa'iil". Bishii 12 ee sanadkii hore...
Israa\_'iil oo 560 guri ka dhiseyso dhulka ay xoogga uga haysato Falastiin
Maamulka Israa'iil ayaa fasaxay in 560 guri oo cusub laga dhiso dhulka ay xoogga ku haystaan ee bariga Qudus. Go'aankan ayaa imaanaya laba maalmood ka dib markii Donald Trump uu la wareegay xilka madaxweyne ee Mareykanka. Go'aanka lagu fasaxay dhismayaasha cusub ayaa dib loo dhigay ka dib markii uu Ra'iisul wasaaraha Israa'iil dalbaday in la hakiyo. Dalabkaasna wuxuu daba...
Israa\_'iil oo amartay wasaaradda arrimaha dibadda inay Jarto xiriirka UN
Benjamin Netanyahu, ayaa sheegay inuu ku amray wasaaradda arrimaha dibadda ee Israa'iil inay bilk u soo afjarta qeemeynta ku saabsan xiriirkooda Qaramada Midoobeey. Waxaa ka mid ah qeybaha ay qiimeynta ku sameynayaan dhaqaalaha ay Israa'iil siiso UN iyo joogitaanka wakiillada UN ee Israa'iil. Ra'iisul wasaaraha Israa'iil wuxuu...